भ्या’स्लिनमा केवल यो २ चिज मिसाएर क’पालमा लगाउनुहोस्, ह’प्तामै देख्नुहुनेछ च’मत्कार – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भ्या’स्लिनमा केवल यो २ चिज मिसाएर क’पालमा लगाउनुहोस्, ह’प्तामै देख्नुहुनेछ च’मत्कार
सा’मान्य रुपमा हेर्ने हो भने मानिसले भ्या’स्लिन आफ्नो श’रीरलाई नरम र चिल्लो बनाउनको लागी जाडोमा लगाउने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा तपाईको मनमा लाग्यो होला कि आखीर भ्यासलीन कसरी कपालमा लगाउन सकिन्छ त ? आज हामी तपाईलाई भ्यास्लिनको प्रयोगको बारेमा बताउने छौँ । जसलाई जानेर र यसको परिवर्तन देखेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ । आजको दौडधुपको समयमा कसैको साथमा पनि त्यति समय हुँदैन जसले आफ्नो कपालमा र स्किनमा ध्यान दिन सक्दैनौँ । जसको कारणले हाम्रो कपाल सुख्खा,हाँगा पलाउने,ज्यादा झर्ने हुन्छ । आज हामी तपाईलाई बताउने छौ कि यो उपाय अपनाउनाले तपाईको यी स’मस्याहरु हराएर जानेछ ।
यसकारणले हुन्छ कपालमा समस्या: कपालको स’मस्याबाट मुक्ति पाउनुभन्दा पहिले किन आउँछ त कपालमा स’मस्या भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक छ । सामान्य रुपमा कपालमा आउने स’मस्या केवल गलत खानपान, अनियमित लाइफस्टाइल र प्रदुषणको कारणले हुने गर्दछ । धेरैजसो मानिस यस कपालको स’मस्याबाट मुक्ति पाउनको लागी छिटो तरिका विधी अपनाउने गर्दछन् । त्यसैले कपालसँग जोडिएको केमिकलयुक्त प्रोडक्ट प्रयोग गर्नपनि पछि पर्दैनन् । धेरैजसो मानिस आफ्नो कपाललाई सुन्दर,मस्याइलो बनाउको लागी बजारका प्रोडक्टको प्रयोग गर्छन् भन्ने नै हो भने बजारका प्रोडक्टमा केमिकलको मसावट हुन्छ जसले पछि अनेकौँ स’मस्या उत्पन्न गराउँछ । तपाइको स्किनलाई सुन्दर र मुलायम बनाउने भ्यास्लिनलाई तपाई अब कपाललाई सुन्दर बनाउनको लागी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । कपालमा भ्यास्लिन लगाउनुको धेरै फाइदा छन्। जसले न त मात्र तपाईको कपालको स’मस्यालाई मात्र छुटकारा दिन्छ यसले तपाईको कपाललाई सुन्दर र चमकदार पनि बनाउँछ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कसरी गर्ने त कपालमा भ्या’स्लिन प्रयोग ? सबैभन्दा पहिला तपाईले यो जान्न जरुरी हुन्छ कि भ्या’स्लिनको प्रयोग तपाइले आफ्नो कपालमा गर्दा यसले तपाईको कपाललाई मुलायम बनाउनुको साथै बाक्लो र कालो पनि बनाउँदछ । तपाई सोचिरहनु भएको छ भने हामी तपाईलाई बताउँछौ कि तपाईको कपालमा हाँगा पलाउनुको मुख्यकारण हो कपाल सुख्खा हुनु । तर यदि तपाईले कपलमा भ्यासलिन लगाउनुभयो भने यसले तपाईको कपाललाई सरख्खा हुन दिँदैन र यसले हाँगा पलाउने समस्यालाई पनि चैट गराउँदछ । भ्यासलिनले तपाईको कपाललाई सफ्ट र सिल्की बनाउँदछ । भ्यास्लिनको प्रयोग गर्नका लागी सबैभन्दा पहिला तपाईले एक कटौरामा २ चम्चा नरिवलको तेल लिनुहोस् र आधा चम्चा भ्यास्लिन र भिटामीन ई को क्याप्सुललाई काटेर सबैलाई मिक्स गर्नुहोस् । यी तीन चिजको मात्राले तपाई आफ्नो कपालको लम्बाइलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ । यी तीन चिजलाई राम्रोसँग फेट्नुहोस् र रातमा सुत्ने समय भन्दा पहिला आफ्नो कपालको जरादेखी लिएर टुप्पोसम्म यस ३ चिजको मिक्सलाई लगाउनुहोस् । पुरै रात यसलाई यत्तिकै छोड्दिनुहोस् । र बिहान उठेर नुहाउने स’मयमा कपाललाई स्याम्पु लगाएर धुनुहोस् । यस्तो मात्र १ हप्तासम्म गर्नुहोस् । तपाँई आफैले फरक देख्नपाउनुहुनेछ । सुन्दर र लामो कपालको लागी मनपरेमा जरुर लगाउने कोशीश गर्नुहोला तपाईको कपाल सुन्दर हुनेछ ।
यी ४ राशि हुने युवतीहरुले पाउँछन् धनी साथै बुद्धिमान पति !